Juventus oo guul ka soo heshay kooxda Inter Milan kulankii lugta hore ee Semi-finalka Coppa Itali… +SAWIRRO – Gool FM
Juventus oo guul ka soo heshay kooxda Inter Milan kulankii lugta hore ee Semi-finalka Coppa Itali… +SAWIRRO
(Milano) 03 Feb 2021. Juventus ayaa guul ka soo heshay kooxda Inter Milan oo ay ku booqatay garoonka Giuseppe Meazza kulankii lugta hore Semi-finalka ee Coppa Itali, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2.
Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay 1-2 ay ku hoggaamineysay kooxda Juventus.
Daqiiqadii 9-aad kooxda Inter Milan ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay weeraryahanka reer Argantina ee Lautaro Martinez, kaddib markii uu caawin ka helay Nicolo Barella.
Laakiin 26 daqiiqo marka ay dheeshu mareysay kooxda Juventus ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool u badelay Cristiano Ronaldo, ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay barbardhac 1-1 ah.
35 daqiiqo Cristiano Ronaldo ayaa hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Juventus, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-2.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-2 oo ay Juventus kaga soo adkaatay kooxda Inter Milan oo ay ku booqatay garoonka Giuseppe Meazza kulankii lugta hore Semi-finalka ee Coppa Itali, iyadoo kulanka lugta labaadna lagu ciyaari doono Allianz Stadium.
Wolverhampton oo garoonkeeda Molineux guuldarro xanuun badan ku baday kooxda Arsenal… +SAWIRRO
Man United oo NUS DARSAN goolal ka badan ku xaaqday kooxda Southampton oo marti ugu aheyd garoonka Old Trafford… +SAWIRRO